Bifa kanaan rasaasaan dhahanii ajjeesanii walitti bu’iinsa namoota dhuunfaa jetti Bilxiginnaan – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosBifa kanaan rasaasaan dhahanii ajjeesanii walitti bu’iinsa namoota dhuunfaa jetti Bilxiginnaan
Tigrai Media House is live now.
ዕለታዊ ዜና (Jun 09 ,2020 )
Abbichi facebook poolisii Oromiyaa harkaa qabu nu doorsisii fedha. Tan doorsisaa booda itti deebina. Amma reeffi gurbaa ajjeefame eessa akka jiru maatiif himaa. Yoo qorannaaf ergamee jiraates bu’aa qorannaa ifa godhaa.
Waakkkachuun aadaa mootummaa tanaati hanga ragaan muddamtee qabamtuu. Fakkeenyaaf torban dabre gaafa Waxabajjii 2, 2020 gurbaa Aanaa Mohammadshaam jedhamu Harargee Bahaa magaalaa Qobbotti ajjeesanii waakkatan. “Qaama hin beekamnetu ajjeese” jedhan. Booda yeroo ragaan haaluu hin dandeenye itti gadi yaa’u amananii dogongoraan ajjeefanee gumaa kafallaa jedhanii jaarsota ergatan.
Jarana, wal beeknaaa bar! Waan ummatarraa hin mirkaneeffatin hin maxxansinu. Amma booda ajjeechaa, hidhaa, dararaa ummata keenyarra gahu hunda ragaan mirkaneeffannee ummata beeksisuutti deebinee jirra. Akka nuti isin hin saaxille yoo feetan falli jiru tokkuma. Ummata ajjeesuu, hidhuufi dararuu dhaabuu!
Uummati Oromoo naannoo Diinshoo jiraatu Dhiiga Ilmaan isaa dhangalaatuuf Falmii eegalee jira. Oromoon golee hundaan Sirna Nafxanyaa Abiyi Ahimadiin durfamtu kana ofirraa cabsuuf ba’ee falmachuu qaba.
Mathewos T. Debela
ዛሬም እንደትናቱ እግር መቁረጥ ቀጥሏል
Saba koo Falmate
Warraaqsa Galaana Ummaataa
Diiddaan ummaataa bakkoota adda addaatti itti fufee Jira.
Ammee! Salaaleettis ajjeechaa garaa nama nyaatu raawwatan
Breaking news!! Amboo!! Maaltu wal irraa hafa guyyaa Xiiqii!!